Ahoana no Mamorona tranonkala Kupon amin'ny WordPress?
Ny tranonkalan’ny kupon dia afaka manampy anao hahazoam-bola amin’ny olona te hampiasa tapakila ary mamonjy vola.
1 Mahazo tombony amin’ny antoko rehetra ny tranokala tapakila – Mpividy, mpivarotra & Middleman (spletna stran spletnega mesta)
2 Ireo Site Koupon in mora ny mamorona, Site Uspešen Coupon dia tena sarotra
3 Ohatra amin’izany ny spletna stran s kuponi
Mahazo tombony amin’ny antoko rehetra ny tranokala tapakila – Mpividy, mpivarotra & Middleman (spletna stran spletnega mesta)
Raha nanontany tena ianao hoe ahoana ny haben’ny tranonkala kupon dia hitanao fa mitovy amin’ny marketing ara-dalàna amin’ny fomba maro; ianao dia mahazo komisiona isaky ny misy olona mampiasa kupon avy amin’ny tranokalan’ny kupon anao hividianana azy.
Fa ny tapakila dia tsy mahasoa anao fotsiny. Ny kuponi dia mitondra orinasa iray na mpanolotra orinasa iray, mandray komisiona ianao ary ny mpamaky / mpitsidika dia mahita ny vokatra natao mba hahafeno ny fepetra takiny amin’ny fihenam-bidy amin’ny vidin’ny tsena. Ny tembony rehetra!
Ireo Site Koupon in mora ny mamorona, Site Uspešen Coupon dia tena sarotra
Misy ohatra maro momba ny tranonkala kupon mahomby igračka ny Smart Source, Mighty Deals, Retail Me Not ary izy no voavonjy. Azonao atao ny manasaraka azy roa amin’ny sokajy roa – tranonkala nipongana niche sy tranonkala fananganana orinasa marobe.
Tranobe na tranokala tsy misy nišo?
Misy vola ve ao amin’ny niša manokana?
Ny zavatra rehetra etsy ambony dia zava-dehibe mila jerena alohan’ny hanapahanao manangana tranokala kupon. Manoro hevitra ny SEMrush aho hanampy anao hamaly ny sasany amin’ireo fanontaniana. Ny lahatsoratr’i Jerry Low Ahoana no fanaovana ny famahanam-bolongana: toro-hevitra momba ny fikarohana, paikady nipetrahana + 10 strategiji mamba ny fitohanana dia manampy koa.
Andeha hojerentsika ny lohahevitra WordPress vitvitsy mba hahitana ny fomba fijerintsika momba ny tranonkala kupon…
Ohatra amin’izany ny spletna stran s kuponi
Hojerentsika ny pikantsary efatra amin’ny fandinihana ireo lohahevitra kupon WordPress ary hodinihintsika ny fiasa ilaina hamelomana ny habaka misy ny kupon anao.
Ity ambony ity dia maneho ny safidy idealy ho an’ny tranokala miaraka amin’ny tapakila katera koli indostria / sekta marobe tsy misy fironana firy amin’ny niša. Ny fikarohana sy ny sivana atao amin’ny fampiratiana sokajy mora mora dia manampy ny mpitsidika mahita ny tapakila mifanaraka amin’ny fepetra takian’izy ireo.
« Obnova в управлінні переглядає веб-сайти по зібраним видаленням 15 Mga Praktikal na Mga Tip upang Pagbutihin, Itaguyod at Kumuha ng Marami pang Trapiko sa Iyong Blog Ngayon »